ဟဲ​လေး (Daddy He`) - ပြည်သူ့အချစ်​တော် [2015 Album] MP3 (320 Kbps !) - Mg Shan Lay
Home ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း 320 Kbps! Album Dယံ High Quality ​Wai လျှံ နီနီခင်​ဇော် ဟဲ​လေး အစ္စဏီ နိုင်းဝမ်း ဟဲ​လေး (Daddy He`) - ပြည်သူ့အချစ်​တော် [2015 Album] MP3 (320 Kbps !)
ဟဲ​လေး (Daddy He`) - ပြည်သူ့အချစ်​တော် [2015 Album] MP3 (320 Kbps !)
6:38:00 PM ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း, 320 Kbps!, Album, Dယံ, High Quality, ​Wai လျှံ, နီနီခင်​ဇော်, ဟဲ​လေး, အစ္စဏီ, နိုင်းဝမ်း,
2. Forever Together [Feat. Nine One]
Mr. ​ဖော​ရှော [Feat. အိမ့်ချစ် ၊ မိစန္ဒီ]
​သေ​ပျော်ပါတယ် [Feat. Dယံ ၊ အစဏ္ဏီ]
​ပြောခွင့်မရတဲ့အဖြစ်များ [Feat. ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း]
Facebook မင်းသားကြီး [Feat. Waiလျှံ ၊ စစ်သူ၊ Pin Pin]
10. Fly Kiss
​ရောဂါ [Feat. နီနီခင်​ဇော်]
Tags # ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း # 320 Kbps! # Album # Dယံ # High Quality # ​Wai လျှံ # နီနီခင်​ဇော် # ဟဲ​လေး # အစ္စဏီ # နိုင်းဝမ်း
Labels: ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း, 320 Kbps!, Album, Dယံ, High Quality, ​Wai လျှံ, နီနီခင်​ဇော်, ဟဲ​လေး, အစ္စဏီ, နိုင်းဝမ်း